अनशनरत डा. केसीको स्वास्थ्यमा समस्या
२७ पुष २०७५, शुक्रबार मा प्रकाशित
इलाम । तीन दिनदेखि इलाममा अनशनरत डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्यमा समस्या आउन थालेको छ ।
उनको रक्तचाप घट्नुको साथै शरीरमा चिसो पसिना आउने, हात थर्थराउने समस्या देखिएको डा.रामकृष्ण आचार्यले जानकारी दिए ।
शुक्रबारदेखि उनको छाती दुख्न थालेको छ भने रक्तचाप न्यून हुँदै गएको छ ।
यसैगरी खोकी निरन्तर लागिरहेकाले त्यसले निमोनिया तथा अन्य संक्रमणको जोखिम बढ्ने देखिएको भन्दै चिकित्सकले सावधानी अपनाउन थालेका छन् ।
उनलाई भेट्न आउने शुभचिन्तकहरुलाई परैबाट भेट्न आग्रह गर्दै सत्याग्रह परिसरको मध्य भागमा डोरी राखेर अलग्गै राखिएको छ । शरीरमा पानीको मात्रा र इलेक्ट्रोलाइट्सको कमीका कारण इलाम अस्पतालको स्वास्थ्य टोलीले नसामा क्यानुला राख्न नसकेको बताइएको छ ।
मुटुको चाल ठिकै रहे पनि कुनै समय असामान्य हुन सक्ने भएकाले निरन्तर मोनिटरिङ गरिएको डा.आचार्यले बताए ।
स्वास्थ्यकर्मीले रगत परीक्षणका लागि आग्रह गर्दा भने उनले इन्कार गरेका छन् ।
स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले उनको स्वास्थ्यमा निरन्तर निगरानी गरिरहेको छ । उनको उपचारमा डा. आचार्यका साथै डा.बृजेन्द्र, डा.सर्विन्द्र, डा.सञ्जय लगायत स्थानीय रूपमा
उपलब्ध चिकित्सक, नर्स, हेल्थ असिस्टेन्टहरुको टोली छ । केसी बुधबारदेखि अनसनमा छन् ।
सरकारसँग भएको सहमति अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित हुनुपर्ने उनको माग थियो । तर सरकारले बुधबार विधेयक बहुमतले पास गरेको छ ।
ग) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघ बढाइयोस् । साथै पूर्वी पहाडका ताप्लेजुंग ,इलाम ,पाँचथर,तेह्रथुम लगायतका जिल्लाका नागरिकलाई उपचारका लागि इलाममा ,भोजपुर,ओखल्ढुंगा ,खोटांग,सप्तरी लगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमा ,पश्चिमी पहाडका डडेल्धुरा ,बैतडी,बझांग लगायतका जिल्ला समेटेर डोटी /डडेल्धुरामा अबिलम्ब मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना शुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।
३. नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारी माथि कारवाही गरियोस् ।
एसईईको परीक्षाफल असार दोस्रो साता सार्वजनिक गरिने
कर्णाली प्रदेशको बजेट ३४ अर्ब ३५ करोड(पूर्णपाठसहित)
सगरमाथाको काखमा भारतीय राजदूतावासको योगा दिवस(फोटो फिचर)